Horonantsary: Fankalazana ny Fisarahan-taona · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 29 Jona 2011 5:00 GMT
Vakio amin'ny teny বাংলা, Español, عربي, Aymara, Italiano, Ελληνικά, English
Arendrina, dihy, voninkazo ary afondasy no fitaovana sasantsasany ampiasaina amin'ny fankalazana manerana izao tontolo izao ny Fisarahan-taona Lohataona sy Ririnina. Andeha hitety izao tontolo izao hijery ireo karazam-pankalazana niseho: Fisarahan-taona ao Stonehenge, Afondasin'ny Fetin'ny Masindahy Joany ao Espaina, Inti Raymi ao Pero, we tripantu ao Chile ary Andron'ny Kupala ao Rosia na Alin'ny lohataona ao Polonina.
Fisarahan-taona vao mangiran-dratsy avy amin'i Taro Taylor, CCBY
Ao Stonehenge ao Angletera, mihaona manodidina an'ilay vato boribory ny vahoaka maro be mba handray ny andro lava indrindra mandritra ny taona eo ambanin'ny fiarovan'ny rahona, fihobiana feno fisalasalana satria toa sarotra tokoa ny hilazana ny fotoana mety hiposahan'ny masoandro. a3HeadedMonkey, nandefa ity horonantsary mahatsikaiky ity izay mitondra ny lohateny hoe: “Tsara ol’ Tonga ny Lohataona Britanika tsara indrindra.﻿”
Ao Coruña, Espaina, afomanga, fisotroana ary matso no nanamarika ny Afom-pifaliana Fetin'ny Masindahy Joany. Efa fomba amam-panao mahazatra an'ireo tanora sy ankizy ny mitsambikina eo amin'ny afondasy ary mahafoy fotoana maro mba hanam-bintana: nampalahelo anefa, fa ny fankalazana tamin'ity taona ity dia nosembanin-drahona noho ny fahafatesana olona roa, ny iray namoy ny ainy raha niezaka nitsambikina tamin'ny afondasy iray lehibe indrindra, maty tao anaty afo izy ka sarotra tamin'ireo mpanatrika ny namonjy azy tao.
Eo anoloan'ny fiangonana Sacsayhuaman ao Cuzco, ao Però, isan'andro dia mikarakara ny fankalazana ny fomba amam-panao Inti Raymi izay manamarika ny fiatombohan'ny taombaovaon'ny Incas izy ireo. Ny Inti Raymi farany nankalazain'ireo Incas dia notontosaina tamin'ny taona 1535 taorian'ny nampiatoan'ny fiangonana katolika sy ny fandresen'i Espaina izany hatramin'ny taona 1944, raha niverina indray izany taorian'ny fanoritsoritana ny tantaran'ny Inca Garcilaso de la Vega. Mpampiasa YouTube gzoraca no manana horonantsary maromaro misy ny dihy sy ny hetsika ara-kolontsaina tao Cuzco izay afaka jerena ao amin'ny YouTube, ao anatin'izany ihany koa ny taorian'ny roa amin'ity taonan'ny Inti Raymi ity izay mampiseho ny fidiran'ny Inca ary koa ny fidiran'ny Colla, vadiny:
We Tripantu [es] no fankalazan'ny vazimba Mapuche mba ho fankasitrahana ny taombaovao amin'ny Fisarahan-taona ririnina. Mampiseho ireo ankizy mpianatra ao Chile mandihy noho ny fankalazana ity fetin'ny teratany ity ny horonantsary manaraka:
Ao an-tanànan'i Maloyaroslavets ao Rosia, mankalaza ny andron'ny Ivan Kupala ny mponina, ary tamin'ity fetin'ny lohataona ity, dia notohizana ny fomba amam-panao amin'ny fitondran'ny vehivavy voninkazo eo amin'ny volony, afomanga sy dihy ao an-tanàna:
Ary ny farany izay tsy latsa-danja kosa dia ny fankalazana manetriketrika tao Polonina, izay ahitana arendrina taratasy misy jiro sy avela mitsingevana eny amin'ny lanitra mainty. Miteny ho azy ny horonantsary mahagaga (via Neatorama):
Mankalaza ny Fisarahan-taona koa ve ianao? Tantarao aminay azafady ny fandehan'izany ao amin'ny fanehoan-kevitra!